लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र होइन समाजवाद ! «
लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र होइन समाजवाद !
प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०७५, आईतवार ०७:५१
लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र होइन समाजवाद ! “लोकतन्त्र, सबैका लागि हुँदैन, जब सबैका लागि हुन्छ्, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन ।”
लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता, आपसमा विरोधी पक्षहरु हुन । तर नेपालमा “लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र, भनेकै सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमसत्ता भनेकै लोकतन्त्र हो” भन्ने नारा रंगीचंगी विज्ञापनका साथ दलाल पुँजीवादको दोकानबाट धमाधम बिक्री गरिँदैछ । त्यसको लागि ग्राहकहरु पनि हारालुछ गरिरहेका छन । जनतालाई मात्र यत्ति थाहा छ, रुख कि सूर्य ? उनिहरुले त्यो के हो ? भनी बुझ्नु त परैजावस । हुन पनि हो वर्गीय समाज भनेको प्रजातन्त्रको लागि उर्बरभूमि मानिन्छ । तसर्थ त्यो शब्दको खेती निक्कै मौलाउने गर्दछ । र त समाजमा लुटतन्त्रको रक्षा सम्भव छ । खास प्रजातन्त्रको साँचो अर्थ त्यो होइन, जुन तिनीहरुले व्यक्त गर्दछन । फेरि मान्छेले गहिरिएर चासो लिदैनन पनि । किन कि शदियौँदेखि अध्यात्मवादको लिड्कोले मान्छेको दिमाग पूरै टेम्स्याएको छ । त्यसलाई खनजोत गरि जिलङ गरेर हल्काफुल्का बनाउने काम प्राय भएको छैन पनि ।
विडम्बना नै भन्नु पर्छ कि नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना त हुन्छ, तर एउटा उत्कर्षमा पुगेपछि त्यो प्रजातन्त्रवादमा पतन हुन्छ । २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि त्यो आशाको केन्द्र बनेको थियो । तर २०४६ को आन्दोलन यता ठूलो हिस्साले प्रजातन्त्रवाद सामु आत्मासमर्पण गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्‍यो । अझ मदन भण्डारीको अन्त्यसँगै, तिनीहरु अब नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकल्प नै छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेसँगै, उता प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी भन्ने पार्टीको उदय भयो । जस्ले जनयुद्धको उदघोष गरि अघि बढ्यो । नेपाल मात्र होइन विश्वकै केन्द्र बन्न गयो । त्यस्ले नेपालमा निक्कै उथलपुथल पनि गर्‍यो ! राजतन्त्र नै हटायो । आममा यो पार्टीले धेरै गर्छ भन्ने विश्वास पनि जगायो । तर अन्तत: फेरि पनि नेपाली जनतालाई धोका दिँदै जनयुद्ध लडेका मध्ये ठूलो हिस्सा प्रजातन्त्रवादमा पतन भयो । र त्यस्ले भन्न थाल्यो कि अब बहुलवादमा आधारित संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पै छैन । तर यो संसारमा निर्विकल्प भन्ने कुनै वस्तु नै छैन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र भन्ने ब्यवस्थाको गलत ढंगले ब्याख्या गर्ने गरिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको सबैभन्दा असल ब्यवस्था हो, यसमा सबैलाई समान हुन्छ, अधिकार बराबर हुन्छ, स्वतन्त्र र बिकासवादी हुन्छ, तसर्थ प्रजातन्त्रले मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, भन्छन । कुरो त्यो होइन प्रजातन्त्रको वास्तविकता :- सिमित वर्ग वा समान वर्गचरित्र भएका मान्छेहरुको लागि मात्र समानता, उन्नति प्रगति र हालीमुहाली हो ।
यदि प्रजातन्त्रमा नै जनता सबै समान, स्वतन्त्र र समृद्ध हुने भए किन चाहियो समाजवाद ? नेपालमा प्रजातन्त्र आएको त निक्कै भयो । नेपाली कांग्रेस पार्टीले किन समाजवाद भन्ने शब्द बोकीहिडेको छ ? अन्य सोशल डेमोक्र्याटहरु पनि समाजवाद नै भन्छन ? यसको सिधा अर्थ, प्रजातन्त्र सबैलाई मनपरेको छैन । किन भने प्रजातन्त्र भनेको केन्द्रिकृत पुँजीवादको मुल आधार हो । भने त्यसले कसरी जनतालाई समान, स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउछ ?
त्यसैले “लोकतन्त्र सबैको लागि होइन, यदि सबै मान्छे समान, स्वतन्त्र र सार्वभौम भएको अवस्थामा, लोकतन्त्रको अस्तित्व नै समाप्त भैइसकेको हुनेछ ।”